FAA'IIDOOYINKA FAA'IIDADA LEH EE FIYOOBIDDA: NOOCYO KALA DUWAN OO ISTICMAALKA IYO KHILAAFAADKA - WALNUT
Ugu Weyn Ee Walnut
Sidee waxtar u tahay caafimaadka dadka?
Hazelnut ama Hazel Muddo dhowr kun oo sano ah, waxaa si wacan loo ogaa dadyowga Yurub, Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika, halkaas oo hantidooda faa'iido leh loo qadariyo. Marka lagu daro dhadhanka wanaagsan iyo sifooyinka nafaqada ee qiimaha nuts (sidoo kale caleemaha, caleenta iyo xitaa xididdada) waxay leeyihiin bogsiin tayada. Aan la yaabin awoowayaasheenu waxay rumaysanyihiin in geedkaani uu siinayo dhimasho iyo waxa uu awood u yeeshay awoodda sarraysa.
Ma taqaanaa? Magaca sayniska ee fiyooba waa "Córylus avellána", oo la xidhiidha erayga Giriigga ah "Korus" iyo magaaladii Roomaanka ee Avellano. Giriiggu si dhakhso ah ayuu u bartilmaameedsaday ama "Pontikbs Corus" (lowska Pontic). Pliny ayaa soo warisay in nasiibku u yimid Giriigta ka soo Pontus - Asia Minor, iyo Hippocrates ayaa tilmaamaya tilmaamaha ku saabsan sida si habboon loogu isticmaalo si loo daaweeyo beerka, kelyaha iyo caloosha. Laga soo bilaabo Gariigga Giriig waxay u yimaadeen Rooma (bartamihii uu ku baxayay waxay noqotay magaaladii Avellano, oo deganaa oo ka mid ah Boqortooyada ku amartay in ay beerato 50 dhirta). Maanta eraygan "hazelnut" ayaa loo adeegsadaa si caan ah. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda, diyaarso - dhexdhexaadinta dhaqanka, oo ka soo jeeda noocyo kala duwan oo diyaarsan (oo ay ku jiraan feejignaanta guud). Sidoo kale, had iyo jeer, asalka ereyga "naar" wuxuu la mid yahay isku midka caleemaha dhirta leh kalluunka kalluunka.
Halabuurka kiimikada ee halista ah
Hazel Hazel waa shey aad u qiimo badan, 100 g kaliya wuxuu ka kooban yahay 657 Kcal. Intaa waxaa dheer, halelku wuxuu ka kooban yahay unug gaar ah, oo la mid ah ukunta cad: 17.2 g waxay ka kooban tahay 18 amino acids (8 ka mid ah waa lagama maarmaan), kaas oo jidhka bani'aadamku heli karo oo kaliya cuntada. Protein qudaar ah oo si fudud loo cabbo ayaa kuu ogolaaneysa inaad sameyso iyada oo aan la cunin hilib (taas oo muhiim u ah tufaaxa).
Hazelnuts waa ilo muhiim u ah:
dufanka (ilaa 70%) - mono- iyo asal dufan leh (52.5 iyo 9.1 g, siday u kala horreeyaan);
fitamiino (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, E, C, A, iwm);
macdan (kalsiyum, birta, fosfooraska, magnesium, manganese, potassium, copper, zinc, selenium, iodine iwm).
In caleemaha of hazel waa badan oo saliidaha lagama maarmaanka ah, glycosides. In jilif ah - waxaa jira betulin, tannins, alkolada.
Waa muhiim! Miro fiican waa in la wada baabbi'iyaa cayriin (wax yar la qalajiyey). Daaweynta kuleylka ayaa dili doonta inta badan fiitamiinada waxayna yareyneysaa sifooyinka bogsashada. Waqtiga ugu wanaagsan ee aad ku qaadato duufaannada - subax Aroortii isticmaalkeeda, waxaa lagula talinayaa in lagu qooyo nuts diirran oo biyo qabow ah (2-4 saacadood). Tani waxay xaqiijineysaa in si dhaqso ah oo buuxda u nuugista nafaqooyinka jirka.
Faa'iidooyinka faa'iido leh ee daadadka jirka jirka
Xitaa aqoonta fudud ee ka kooban kiimiko ee khatarta ah ayaa kuu oggolaanaysa inaad fahamto faa'iidooyinka fayoobaanta. Kaliya hal bir birta ku jirta naaskani waxa uu ka kooban yahay 200% caadada dadka ee maalinlaha ah. Hippocrates ayaa sheegay in fawaakihtu ay u fiicantahay qof walba (da 'yaryar iyo da') oo waxtar u leh qof walba.
Isticmaalka joogtada ah ee duufaannada cuntada ku jirta ayaa jidhka siinaya borotiinno muhiim ah, fiitamiino, dufan iyo macaadin:
Faytamiin C, birta, magnesium iyo potassium ayaa lagama maarmaan u ah wadnaha, xididdada dhiigga, dhejiska hemoglobin;
asiidh dufan ah - si looga hortago xanuunka atherosclerosis, stroke iyo cudurrada kale;
phytosterols iyo fitamiin E, naxaas iyo manganese - antioxidants oo leh hanti-gabowga;
fosfooraska, magnesium iyo potassium - xoojinta lafaha, ilkaha, xubnaha;
Fitamiin B - ka ilaalinta neerfaha iyo walbahaarka.
Waxaa sidoo kale jira sifooyin gaar ah oo ka mid ah duufaanta, taas oo faa'iido u noqon doonta lab iyo dheddig oo xoog leh.
Nederlandka waxaa ku jira waxyaabo badan oo faa'iido leh iyo fitamiino kuwaas oo ka faa'iideysanaya jirka haweenka.
qadar badan oo folic acid ah ee nuts ayaa faa'iido u leh haweenka uurka leh, maxaa yeelay cunada cunnida inta lagu guda jiro uurka waxay xaqiijin doontaa horumarka caadiga ah ee ilmaha caloosha;
lowska ayaa siinaya koror weyn oo tamar ah. Inkasta oo maadada calorie ee sarreeya, isku-darka asiidhku aad ayuu u fiicanyahay in isticmaalka joogtada ah ee nuts uusan u horseedi doonin sicirka centimeter ee dhexda, ka soo horjeeda, "xun" kolestaroolka waa laga saari doonaa jirka;
caawimaan xanuunka dareenka;
ilaaliso quruxda dabiiciga ah ee haweenka iyo dib u noolow maqaarka;
Nuts ayaa ragga ka caawiya sidii ay ula qabsan lahaayeen jimicsiga jidhka culus, laakiin taasi maahan. Hazel muddo dheer ayaa loo adeegsaday daawada dhaqameedka oo ah hab lagu kobciyo awoodda. Folic acid wuxuu ka qaybqaataa geedi socodka shahwada (30 g of hazelnuts waxaa ku jira 90% baahida nololeed ee nololeed ee loogu talagalay acidkan). Intaas waxaa sii dheer, diyaargarowga ayaa ka caawisa cudurada prostate (hababka bararka leh waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan 50 g oo digaag maalinle ah).
Ma taqaanaa? Hazel wuxuu la xidhiidhaa diinta iyo aaminsanaanta wadamada badan ee Yurub. Giriiggii hore - Hermes, Roomana - oo leh Mercury, Norman - oo leh Odin, Celts - oo leh beero. Dadka ku nool Scandinavian iyo Celtic, khatarta waxay u adeegsadeen difaaca ka soo horjeeda sixirka sharka. Celtic Druids waxay la socotay shaqaale ka sameyay duufaan duur joog ah. Maalmihii hore waxaa la rumeeysan yahay in naas-nuujintu keentay xigmad iyo hadiyad si ay mustaqbalka u aragto. Laga soo bilaabo laamiyada lafdhabarta ah ee caanaha caadiga ah waxay sameeyeen "geed canab ah oo magiciisa", iyada oo la adeegsanayo taas oo suurta gal ah in la helo shay kasta oo lumay, khasnad, ilo biyo, qof dambi galay. Hazelnut - hogaamiyaha "niyadda". Waxaa la aaminsan yahay in geedkii walnut uu leeyahay karti u leeyahay in uu sii wado qafiska, dhaawaca iyo cudurada. Slavs ayaa aaminsan in warshadani ay ka ilaalinayso duufaannada iyo walbahaar kasta.
Isticmaalka nacfiga daawada dhaqameed
Noocyada dhaqameedka ah waxay si firfircoon u isticmaalaan digaagga, kuwaas oo midabyo leh cows (hilqado), caleemaha qoyan, qolof, caleemo, jilif, xididada. Guryaha bogsashada (bogsashada, antipyretic, jeermi-dilista, dheecaanka, difaaca jidhka, dhiig-yari, iyo kuwa kale) ayaa la ogaaday oo si wax ku ool ah loo codsaday. Waxaa intaa dheer, naas-nuujinta daawada dabiiciga ah ayaa sii socota in loo adeegsado maanta.
Shaaha ka soo baxa caleemaha si aad u xoojiso nidaamka difaaca jirka
Caleemaha Hazel waxaa ku jira saliidyo badan oo muhiim ah, asiido (ascorbic, palmitic), myricitroside glycoside, iyo kuwo kale oo badan. Kuwaasi, waxaad diyaarin kartaa cabitaan tonic ah oo si wax ku ool ah u taageera nidaamka difaaca. Waxaa loo diyaariyaa si la mid ah shaaha: waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo biyo karkaraya caleemaha, ku adkeyso kuleylka muddo 10 daqiiqo ah una cab cabi malab ama macaan (ama si fudud ku dar sonkorta). Caleemaha Hazel waxaa la dhigi karaa shaaha caadiga ah ama ururinta daawooyinka.
Casiirka Hazel oo leh dhiig yari (dhiig yari)
Caleemaha Hazel ayaa loo isticmaalay daawaynta dhiig-yaraaneed. Caleemaha yaryar oo cusub ayaa la ururiyaa inta lagu jiro ubax of fiyuusta, ka dib markii taas oo ay la jajabiyey iyo cadaadiyey iyadoo la isticmaalayo blender ah. Cabbitaanka soo hartay waa in la sakhraamo inta lagu jiro bisha (30 ml) malab (15 ml) saddex jeer maalintii kahor cuntada.
Ma taqaanaa? Gobollada ugu muhiimsan ee wax soo saarka digaaga - Koonfurta Badda Carabta iyo Transcaucasus. Ilaa 78% oo ka mid ah goosashada adduunka ayaa koray halkan (Turkey - 70%, Georgia - 4%, Azerbaijan - 4%). 17% lowska ku koray Talyaaniga, 5% - ee Maraykanka. Machadka cilmi-baarista ee khaaska ah ayaa laga sameeyay magaalada Trabzon (Turkiga).
Isku dar ah naaso dufan leh malab leh dhiig la'aan iyo lumis xoog
Iyadoo dhiig la'aan, isku dar ah oo la kariyey oo ah kernels iyo fawaarta ayaa leh saameyn wax ku ool ah (hal galaas oo bur ah ayaa u baahan doona badh koob oo malab). Maaddooyinka oo dhan ayaa lagu qasi karaa blender. Saddex jeer maalintii, ka hor intaadan cunin waxaad u baahan tahay inaad qaaddo dufanka daroogada. Hazel oo qaba dhiig-yarida ayaa sidoo kale loo isticmaalaa cabitaanka soodhada, taas oo dhammaan nuts (2 qaado) u baahan yihiin in la jajabiyo, ku dar malab (2 qaado) iyo 50 ml oo biyo ah karkaraya. Ku garaac isku dar ah, ku dar biyo badan oo karkaraya (200 ml) iyo jeermi 30 daqiiqo. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo maalin kasta (shan jeer 50 ml), saddex toddobaad gudahood. Waxtarka ugu fiican, waxaa lagu talinayaa in lagu daro abrikot qallalan.
Dib-u-habaynta fowdada leh shuban (shuban)
Shubanka waxaa lagu daaweeyaa qolofka cows ee cows. Wixii diyaarinta ee maraqadu waxay u baahan tahay 20 g oo ah walxo cayriin ah iyo 25 ml biyo karkaraya. Xayawaanka waa in laga buuxiyaa biyo karkaraya, oo loo oggol yahay inay istaagaan 15 daqiiqo oo kale kariyaha, ku adkeyso oo ku qabow dhowr saacadood, ka dib markaa la cabi karo 60 ml afar jeer maalintii.
Decoction ee caleemaha ee daaweynta cudurrada wadnaha
Caleemaha Hazel waxay wax ku ool u yihiin daawaynta cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, iyo sifooyinka faa'idooyinka ee goobahaas lagu tijaabiyay ficil ahaan. Wixii diyaarinta faleebada daaweynta, qaado oo ah budo ah caleen khudrad ah oo qallalan ayaa lagu shubay biyo karkaraya (250 ml), daboolay, oo lagu hayaa barkadda biyaha 15 daqiiqo (kulaylka ugu hooseeya). Ka dib markaa, ka saari halabuurka kuleylka isla markaana u diyaari saacad kale. Natiijo ahaan, waxay ku sii jirtaa oo kaliya in ay adkeyso daroogada iyo cabin 3-4 ml 50 ml maalintii. Koorsada daaweyntu waa saddex bilood.
Waa muhiim! Nuts foornada caadiga ah (oo ay ku jiraan duufaanada) kuma jiraan gluten. Tani waxay ka dhigeysaa badeeco ammaan ah oo loogu talagalay isticmaalka dadka qaba cuddurada baruurta (gluten unolerance).
Dib-u-soo-kabasho oo ah cayayaanka foornada sida febrifuge
Kalluunku wuxuu kaloo leeyahay hanti daweyn oo si wax ku ool ah loo isticmaalo dagaalka ka dhanka ah hargabka. Biyo budo qallalan (3 qaado), biyo karkaraya (1 litir), waa in lagu hayaa weel xiran ilaa 15 daqiiqadood oo ka baxsan kuleylka hooseeya. Kadib, qabow, cadaadis (mugga hoos u dhigis, waxaad ku dari kartaa biyaha la karkariyey) oo cabi calool madhan 3-4 jeer maalintii 1/3 koob.
Faleebo ka mid ah caleemaha khatarta ku jirta adenoma qanjirka 'prostate'
Daaweynta cudurkan, barkada cayayaanka (oo la goostay xilligii socodka qumbaha) iyo caleemaha cusub ama qallalan ayaa loo isticmaalaa:
caleemo cusub (10 qaado) ama qalalan (5 qaado qaado), lagu riday weel dhalaalay, oo daboolaya litir biyo cusub oo la kariyey, meel u dhow oo la dhigo qabow;
jilif la jarjaray (8 qaado) ku shub biyo karkaraya (250 ml), karkari shan daqiiqadood oo ku adkeyso saacad kale;
Waxyeelada keentay waxay u baahan tahay in la cuno laba jeer maalintii, 100 ml midkiiba, saddexdii biloodba, mid ka mid ah daawooyinka waa inay si dhab ah u dhacaan laga bilaabo 19.00 ilaa 21.00, maaddaama ay tahay waqtigan in qanjirka 'prostate' si wax ku ool ah loo daweyn karo.
Cagaarshowga wuxuu baxaa tincture
Si aad u diyaariso tincture waxay u baahan doontaa caleemo cusub oo ah fiyuus. Isticmaalida blender, waxay u baahan yihiin in ay qaawiyaan, iyo slurry keentay waxaa la dhigayaa weel quraarad ah (laga sameeyey dhalo cagaaran ama brown cad), iyo si ay u qaadato ½ mugga. Qeybta soo hartay waxaa la soo buuxiyay khamri cad oo qallalan. Markabka waa in lagu meeleeyaa meel mugdi ah oo qabow (waa in la ruxaa maalin kasta). Toddobaad kaddib, daadi, si taxadar leh u cadaadi. Qaado saddex goor maalintii maalintii 0.5 koob oo bil ah.
Ma taqaanaa? Cunto ka timaadda caanaha caadiga ah way adagtahay in la qiimeeyo. Marka laga soo tago lafaha iyo caleemaha caafimaad leh, waxay si fiican u hagaajineysaa ceelasha, waxay ka ilaalisaa dhulgariirrada, iyo alwaaxdeeda waxay caan ku tahay soo saarista farsamada gacanta, cajaladaha, iwm. Intaa waxaa dheer, khamriga waxaa lagu sifeeyaa balka daboolka ah, maadada iyo fareeshka laga helo jilifkiisa, xayawaanku wuxuu u dhaqmaa sida dhirta malab ee leh manka nafaqo leh, iyo laamaha iyo caleemaha waa cunto xayawaan leh. Saliidda dhirta waxaa si firfircoon loo isticmaalaa koolejka iyo wax soo saarka cayayaanka, rinjiga, iwm.
Faleebo foosto faleebo leh xididdada badarka
Feelfutoor wuxuu kaloo kaa caawin karaa cudurrada noocaas ah sida xididdada isbeddelka ah, markaa waxaad u baahan tahay faleebo ku habboon. Diyaarinteeda waxaa lagama maarmaan ah in la qaato jilifka cawska iyo arnica buur (1: 1) 1.5 qaado, ku dar oo isku qas, ku shub biyo karkaraya darmuus (1000 ml). Marka xigta, si hufan u xir oo u bax habeen. Qaado cuntada ka hor. Nidaamkan waxaa lagu dari karaa cadaadiska (kudheer faleebo jilicsan iyo caanaha 1: 1.
Saliid fawaakiin ah oo infekshin leh (wareeg wareega)
Wax qarsoodi ah maaha saliideedu inay jirka ka caawiso si tartiib ah oo si ammaan ah uga takhalusta dulinyada sida wareega wareegga. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato daawada 15 ml kahor cuntooyinka (25 daqiiqo) afar jeer maalintii. Muddada daaweynta - saddex toddobaad.
Cows-ka si loo hagaajiyo nuujinta
Suufka Hazel - hab lagu kalsoonaan karo si loo kordhiyo qiimaha nafaqada ee caanaha naaska iyo qadarkeeda. Si aad tan u samayso, ku rid shucaac si aad u sameyso galaas khafiif ah oo caano ah, ku shub caanaha lo'da (2 koob oo) iyaga ka sarreeya iyo kuleyl (aan lahayn karkarin) 10 daqiiqo oo kale. Ku dar sonkor ama malab, isku dhow iyo qabow. Cab kulul, qiyaastii nus saac ka hor inta aanad quudin ilmaha.
Waa muhiim! Doorashada saxda ah ee nuts waxay qeexaysaa xeerarkeeda. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato lowska qolofka, maaddaama laydhka cagaaran ay saameyn karto cudurada fangas (ma awoodi kartid in aad dhaqdo oo aad jeermisid). Marka labaad, waxaa lagama maarmaan ah in si muuqata loo ogaado midabada midabka lowska oo hubi codka xuddunkiisa (adigoo ruxaya waa inuu garaaca derbiyada qolofka). Seddexaad, nuts waa in ay ahaato mid nadiif ah (qoyaanka waxay noqon karaan kuwo cayayaanka leh).
Uruurinta, diyaarinta iyo kaydinta fiyoobidda
Si ciriiri ah u badbaadiyo guryaha, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loo ururiyo loona kaydiyo alaabta la soo ururiyey. Waa lagama maarmaan in la gooyo dhirta daawada ee goobaha ecologically nadiif ah. Marka ugu horreysa waxay bilaabaan inay soo ururiyaan cayayaanka - iyadoo bilowga boogaarka lowska (ka sii fiican, ilaa ay burooyinkoodii kala direen). Waa in laga saaraa laamaha, taas oo la gooyaa inta lagu jiro khafiifinta. Qalitaanku wuxuu qaadataa dhowr wiig (ilaa uu u muuqdo mid jajabsan marka la riixo).
Ururinta caleemaha sidoo kale waxay leedahay sifooyin gaar ah:
Waxaa lagula talinayaa in la sameeyo habka lagu jiro ubax (horraanta May). Waqtigaan, marka cimiladu qallalan tahay, caleemaha yaryar iyo bacaha (weelal gaar ah) ayaa la jeexay.
Marka ururinta caleemaha xagaaga, faa'iidada iyaga ka mid ahi waxay ka yar yahiin guga, laakiin dhaawaca geedka ayaa noqon doona mid aad u yar.
Qallajinta caleemo meel madow oo leh hawo wanaagsan. Caleemaha waxaa la dhigaa hal lakab oo ku yaalla xaashid xayawaan, waraaqo, digrii, halkaasoo ay u baahan yihiin in ay si gooni gooni ah isugu daraan. Qaadida nuts waxay dhacaysaa bisha Sebtembar, marka ay soo noqdaan bunni waxayna bilaabaan inay ka soo baxaan geedka. Waxay dalagaan dalagga ee maqaarka (qaawan), ka dibna waa la kala soocaa (waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro waxyeelo, wiiqday cayayaanka, iwm) waxaana ugu dambeyn la qalajiyey qorraxda ama foornada. Qalabka ceeriin ee la qalajiyey waa in lagu keydiyaa sanduuqyada kartoonada, sanduuqyada alwaaxda ah iyo shaatiinka ama bacaha dharka oo aan ka badnayn hal sano (caleenta - laba sano).
Sida loo isticmaalo naaseelka kookhoolojiyada
Kaabashka guud - Waa ilaahyo loogu talagalay dadka jecel deegaanka qurxinta dabiiciga ah ee aan lahayn kiimikooyin. Marka loo eego kondhomka dadweynaha, dib-u-caleemaha caleemaha iyo caleemaha dhallinyarada ah ayaa badanaa la isticmaalaa. Waxay si firfircoon u yareysaa bararka indhaha iyo casaanka maqaarka. Shan iyo toban daqiiqo qaadashada barkad 37-degree ah oo lagu daro maraq (4 qaado oo caleemo qoyan la daadiyay oo la dhajiyay litir biyo ah, oo ka tagaya nus saac) waxay ku dadaalaysaa inay hagaajiso maqaarka maqaarka, dibudhin maqaarka. Goob gaar ah waxaa lagu qabsadaa saliideed saliideed (hargab qabow).
Saliidda waxaa loo isticmaalaa daryeelka:
timaha (qadar yar ayaa lagu miiray madaxa si loo xoojiyo xididada: marka barafka, saliidda kuleylka ah illaa 50 ° C ayaa lagu daboolaa timo nadiif ah, xiran 5-6 saacadood, ka dibna lagu maydho shaambo);
ka dambeeya maqaarka dhibka leh ee wejiga (saliidda waa la nuugo adigoon ka tagin raad, si fiican u nadiifi). Saliida Hazel (15 ml) oo lagu daro saliidaha lagama maarmaanka ah ee la isku qurxiyo, oranjaha iyo dhagxaanta (hal dhibic kasta) ayaa ka dhigaya maqaarka buluugta ah, oo xajiya maqaarka. Isku dar ah 15 ml saliid cows ah, laba dhibcood oo saliida miraha ah iyo saliida saliidda waxay ka caawisaa finanka. Saliid ciiri ah waa in lagu rushaa maqaarka indhaha.
Cunnooyinka qumbaha waxaa loo isticmaalaa diyaarinta maaskarada:
Nadiifinta: toban nuts waa in lagu jajabiyaa blender, ku shub caano la kariyey (45 ml), ku dar malab (dareere) dareere ah (15 ml) oo codsanaya maqaarka. Ka dib 15 daqiiqo, maaskarada waxaa lagu dhaqaa biyo kulul.
Maqaarka engegan: lix nuts waa in lagu jajabiyaa blender, qaso 20 ml oo saliid saytuun ah (ilaa kareemka labeen dhanaan), ku adkeyso nus saac, waji wejiga wajiga oo ku hayn 10 daqiiqo. Ka saar balaashadan masaafo leh shaaha cagaaran. Taas ka dib, waxay ku sugantahay 5 daqiiqo oo wejigaaga ku maydh biyo qabow.
Maqaarka caadiga ah: saliidda walxaha (15 ml) waa in lagu daraa saliid walnut ah (15 ml), shaah adag (15 ml), lowska la jarjaray (1.5 qaado). Maaskiga waxaa la dalbadaa 30 daqiiqadood, ka dibna ku dhaq biyo diirran.
Saliidda Walnut waxaa sidoo kale loo isticmaalaa miisaanka jirka oo dhan iyo cagaha, maadaama ay leedahay saameyn tonic ah.
Ka hor inta aan la bilaabin daaweynta, waa in la xusuusnaado in marka lagu daro sifooyinka nafsadda ah, fiyuusku wuxuu leeyahay khilaafyo u gaar ah.
Gaar ahaan, waa in aadan ka qaybgelin dadka dadka curyaamiinta ah ee leh:
cudurada joogtada ah ee beerka iyo xameeya;
Xasaasiyad shakhsi ahaaneed (dareen-celin xasaasiyadeed).
Caleemaha Hazel ayaa iska horimaad u geysta bukaanada qaba hypertensive, maadaama ay kordhin karaan cadaadiska, korrelka cunnooyinka ayaa kordhin kara cudurrada maqaarka ee joogtada ah, oo loo baahan yahay in lagu tixgeliyo bukaanada qaba cudurka psoriasis.
Ma taqaanaa? Tayada fiicnayd ee fiyuusta waxaa lagu ogaaday dhakhtarkii hore ee Giriigga Dioscorides - awoodda fayadhawrka si aad u diiriso jirka. Haddii aad qabow tahay, waa inaad ku dartaa nuts si aad u hesho cunto ama cabitaan, taas oo kaa caawinaysa inaad si dhaqso ah u kululaato.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Walnut 2019